မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: June 2011
ဖို့ဝိန်းမြန်မာကွန်မြုနီတီရဲ့ ဓမ္မရက္ခတကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပမယ့် တရားပွဲ ၂ ပွဲ ဖိတ်စာ (နဝမ) ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ ၏ တရားပွဲ(ဇူလိုင်လ ၂ နဲ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့)
အရှင်ရာဇိန္ဒ (စာရေးဆရာ ရဝေနွယ်) ၏ ၀ိပဿနာစခန်းပွဲ(ဇူလိုင်လ ၄ မှ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်အထိ - ၇ ရက်စခန်းပွဲ)
Reactions: 42 Cronies supporting Burmese Regime - USCB
ယူအက်စ်ကင်ပိန်းက ပိတ်ဆို့ရန်အဆုိုတင်ထားသော စစ်အစုိုးရအလုိုတော်ရိ ၄၂ ဦးစာရင်းမိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁ မိုးမခက ယခင်၂ ပတ်က သတင်းတွင် စာရင်းကောက်ယူထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၄၂ ဦး စာရင်းနှင့် ယူအက်စ်ကင်ပိန်းက အမေရိကန်အစုိုးရသို့ ပိတ်ဆို့အရေးယူရန် တင်သွင်းသော ၄၂ ဦး စာရင်း မှာ တိုက်ရိုက်ထပ်တူညီခြင်း မရှိပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယူအက်စ်ကင်ပိန်း၏ အမေရိကန်အစုိုးရထံ တင်သွင်းသော စစ်အစုိုးရအလုိုတော်ရိ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသမားများစာရင်းကို မြန်မာဘာသာဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ၄၂ ဦး အနက် ဥရောပက ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ထားခြင်းနှင့် သြစတြေးလျက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ဖြင့် အရေးယူခံထားရသူများ အဓိကပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ အရေးမယူထားသော်လည်း အမေရိကန်အစုိုးရအနေဖြင့် သီးခြား ပိတ်ဆို့သင့်သူများကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (U.S. Campaign for Burma) မှ အမေရိကန်အစိုးရ သို့ တင်ပြထားသော ဥပဒေအရ ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို့အရေးယူသင့်သည့် မြန်မာစစ်အုပ်စုအား ထောက်ပံ့ကူညီနေသော အလိုတော်ရိစီးပွါးရေးသမားများနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားများ၏ အမည်စာရင်း၊ ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၁
Reactions: Martyrs Day Songs
မော်ကွန်းဝင် အာဇာနည်သီချင်းများမိုးမခ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁ပန်းချီ - ကိုမျိုးဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း အာဇာနည်နေ့ဆိုတာကို အမျိုးကိုချစ်၊ နိုင်ငံကိုချစ်၊ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ချစ်ကြ တဲ့သူတိုင်း သတိရမိကြမှာပါ။ လွတ်လပ်ရေးအရယူပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကျဆုံးခဲ့တဲ့နေ့၊ တပ်မ တော်ဖခင်ကြီးကျဆုံးခဲ့တဲ့နေ့၊ အာဇာနည်နေ့ဟာ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်အောင် ဖုံးကွယ်ဖျက် ဆီးခံနေရတာ အထူးပြောပြနေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အာဇာနည်တွေရဲ့သမိုင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ရုပ်ပုံ၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဂုဏ်ပြုရေးစပ်တဲ့ တေးသီချင်း အာဇာနည်သီချင်းတွေကလည်း အဖျောက်ဖျက်ခံနေရ ပါပြီ။ ဒါကြောင့် မိုးမခပရိသတ်အတွက် ရှားပါးပျောက်ကွယ်လုသီချင်းတွေထဲက လက်လှမ်းမီသမျှ စုစည်းပြီး အားပါးတရ ခံစားနားဆင်နိုင်အောင် ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ နားဆင်ရာမှာ ပိုမိုခံစားနိုင်စေဖို့ တေး သံများသာမက တေးစာသား များပါ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။... .... ....အလေးပြုပါသည်သီဆိုသူ - မေလှမြိုင် ရေးစပ်သီကုံးသူ - ဂီတာတင်အုံး(နှစ်လဌာနီ အခါရာသီရွေ့ပေမယ့် အာဇာနည်နေ့ကိုဖြင့် မမေ့သင့်ပါသလေ x x x ယနေ့ဖြင့် သတိတရားထားဖို့ အ ခြေ x x x အများပြည်သူတွေ အများပြည်သူတွေ x x x အာဇာနည်နေ့ကိုလေ တွေးရှုကာပဲ x x x အေ လးပြုပါမယ်လေ x x x )၂စနစ်အနေပြောင်းခဲ့ပေမယ့် အဖြစ်ဟောင်းက ဖြေသော်မပြေ x x x လွမ်း ... မျက်ရည် မြေခပြီမို့ တွေးတ သသ ဆွေးစမရွှင်ပေ x x x ရွှေရင်ဆူကဲ ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပုံတွေ ယနေ့ထက်တိုင် အခြေ မမေ့ရက်နိုင်ပါလေ x x xအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ x x x အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ x x x ကောင်းရာသုဂတိရောက်ရှိကြပြီလေ x x xတေးကဗျာ အနုစာခွေရေးကာ တေးပြု x x x အလေးပြုပါတယ်လေ x x x(အစအဆုံး ပြန်ဆို)သီချင်းအား ဒီနေရာတွင် နားဆင်နိုင်ပါသည်။
Reactions: Cartoon Saw Ngo – Mandalay
ကာတွန်း စောငို - မန္တလေးဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁
Reactions: Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (29th June 2011)
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ သတင်းမှတ်စု လှုပ်ရှားမှုများကျော်သူဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁ ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါ
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် နာရေးကိစ္စများကို (အခမဲ့) ကူညီပေးခြင်း၊ သုခကုသိုလ် ဖြစ်ဆေးခန်းမှ ဆေးဝါး (အခမဲ့) ကုသပေးမှုများ၊ ပညာဒါနသင်တန်းများရှိသည်နှင့်အညီ နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်ကြသူများမှာ နာရေးကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စ၊ ပညာရေးကိစ္စတို့နှင့် တနည်းမဟုတ်တနည်း ပတ်သက်နေကြသူများ ဖြစ်သည်။ READ MORE - အပြည့်အစုံ
Reactions: Burmese Americans formed 18 soccer teams in East Coast aiming professional and tournament
ပြည်ပရောက်မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ 4th of July ဒိုင်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အော်ဘာနီမြို့တွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (အော်ဘာနီ)၊ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁အော်ဘာနီ မြို့တွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ အားကစားလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်တရပ်အဖြစ် ဘောလုံးအသင်းများ ဖွဲ့စည်း ၍ နီးစပ်ရာမြို့နယ်များရှိ အသင်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းများကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြ သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Rensselaer City (Albany) ရှိ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများစုပေါင်းပါဝင်သည့် Albany Youth Soccer Team ကို စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီး ယူတီကာ၊ ဆာယာကျူ၊ ရော့ချက်ပ်စတာ၊ မင်နီဆိုတာ၊ ဘတ်ဖလိုး၊ အင်ဒီယားနားပုလစ်၊ မစ်ရှီဂမ် တို့မှအသင်းပေါင်း ၁၈ သင်းပါဝင်သည့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အထက်ပါမြို့များမှအသင်းများ စုပေါင်းပါဝင်သည့် East Cost မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံ(၃)ဦးနှင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်အထိ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ ဒိုင်ချုပ်ကိုဒင်နီရယ် (ယူတီကာ)၊ ကိုရဲနီ -စည်းရုံးရေးတာဝန်ခံ (အယ်ဘာနီ)၊ ကိုအင်ဒရူး (တာဝန်ခံ) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစပြီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို East Cost မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့က ဦးစီး၍ ယူတီကာမြို့တွင် နှစ်စဉ်မပျက်မကွက်ကျင်းပလာခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်မူ အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ အသင်းကဦးဆောင်၍ အော်ဘာနီ မြို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပထမအကြိမ် 4th of July ဒိုင်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဘောလုံးကစားသမား အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို ငွေကုန် ကြေးကျခံ၍ ကြိုးစားကျင်းပပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၄င်းတို့ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကြေးစားကလပ်အသင်းများ တွင်ဝင်ရောက်ခြေစွမ်း ပြနိုင်သည်အထိ ရည်ရွယ်လေ့ကျင့်ပေးနေကြောင်း ဘောလုံးပွဲများဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နေသူတဦးဖြစ်သည့် ကိုရဲနီကပြောပါသည်။ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့သည့် ယခု 4th of July ဒိုင်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို အော်ဘာနီ၊ ယူတီကာ၊ ဆာရာကျူ့ ၊ ဗန်မောက်၊ ဟက်ဖို့ဒ်မြို့တို့က မြန်မာတိုင်းရင်းသားဘောလုံးအသင်းပေါင်း (၁၁) သင်းဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ကြ ပါပြီး နီးစပ်ရာမြို့နယ်များမှ ဘောလုံးပွဲဝါသနာရှင် ပရိသတ်စုစုပေါင်း ၅၀၀ ကျော်လာရောက်အားပေးကြကြောင်းသိရှိရသည်။ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲကို ယူတီကာမြို့က KYU အသင်းနဲ့ OTC အသင်းတို့ တက်ရောက် လာကြပြီး KYU အသင်းက ၃ဂိုး ၂ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီးပထမဒိုင်းဆု ရယူသွားနိုင်ခဲ့သည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ အားကစားလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တရပ်ဖြစ်သည့် ယခုနှစ် 4th of July ဒိုင်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း (အော်ဘာနီဋ္ဌာနခွဲ)က အင်တိုက်အားတိုက် ဝိုင်းဝန်းကူညီအားဖြည့် ပေးခဲ့ပါ သည်။ မိမိတို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကြေးစားကလပ်အသင်းများ တွင်ဝင်ရောက်ခြေစွမ်း ပြနိုင် စေရန်အထိရည်ရွယ်၍ ဝိုင်း​ဝန်းကြိုးစားနေကြသည်ကို ကြိုဆိုအားပေးကြောင်း နှင့် ဘောလုံးအသင်း ၂ သင်းအတွက်အားကစား ဝတ်စုံများ၊ နဖူးစည်းစာတမ်းများ တာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး အကျွေးအမွေး အစီအစဉ်များ ဖြင့်လည်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း (အော်ဘာနီဋ္ဌာနခွဲ)တာဝန်ခံ ကိုထွန်းထွန်းကပြောပါသည်။ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း (အော်ဘာနီဋ္ဌာနခွဲ) ရဲ့ ယခုနှစ်အတွက် ပွဲဦးထွက် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှေ့တွင်လည်း ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်လှုပ်ရှားမှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်သွားရန် စီစဉ်ထားပါကြောင်းကိုလည်း ကိုထွန်းထွန်းက ဆက်လက်ပြောကြားသွားပါသည်။
Reactions: One Decade later, Burmese pensioners received their entitlement raised
ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာမှ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပင်စင်လစာများ တိုးပေးမိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန်ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ ပင်စင်ယူခဲ့သည့် ပင်စင်စားများအား ယခုလက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ၀န်ထမ်းများ ပင်စင်ယူလျင်ခံစားရမည့် ပင်စင်လစာနှုန်းထား အတိုင်းခံစားခွင့်ပြုရန် ယနေ့ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေး ၁၂/၂၀၁၁ မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး လာမည့်လ ဇူလိုင်လမှ စတင်ခံစားခွင့်ရှိမည်ဟု ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီး ဦးလှထွန်းက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်အတွင်း ၀န်ထမ်းလစာ နှုန်းထား ၄ ကြိမ်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သော်လည်း ပင်စင်စားများ၏ လစာနှုန်းထားကိုမူ ၁၉၉၃၊ ၉၄ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်ကြိမ်သာ တိုးပေးခဲ့ဖူးသည်ဟု အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကပြောသည်။ ထို့အကြိမ်က ပင်စင်စားများအား နကိုရရှိသည့် ပင်စင်လစာ၏ ၂ ဆအဖြစ် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ပင်စင်စားကပြောသည်။ အဆိုပါကာလနောက်ပိုင်း ပင်စင်စားများ အနေဖြင့် နကိုပင်စင်ယူစဉ်က ရရှိသည့် နှုန်းထားများအတိုင်းသာ သတ်မှတ်ပြီး ချန်လှပ်ထားခဲ့ရာမှ ယခုတစ်ကြိမ် ပင်စင်စားများ၏ လစာကိုတိုးမြှင့်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ကြီးမားစွာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်အတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမှာ အနိမ့်ဆုံး အဆ ၂၀မှ အဆပေါင်း ၁၀၀ ၀န်းကျင်ထိ အသီးသီးရှိခဲ့သော်လည်း အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်းများ၏ ပင်စင်လစာမှာမူ သိသာစွာမြင့်တက်ခြင်း မရှိခဲ့ဟု ပင်စင်စားများအား မေးမြန်း သိရှိရသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂၃ နှစ်ကျော်က ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာနတွင် အောက်တန်း စာရေး လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက ထိုစဉ်က သူရရှိသည့် လခမှာ ၁၅၀ ကျပ်သာဖြစ်ပြီး ထိုအဆင့်ဝန်ထမ်း အနေဖြင့် ယနေ့ ရရှိသည့် လစာမှာ ၂၇၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ ထို့နှုန်းထားကို တွက်ချက်ကြည့်လျင် န၀တ၊ နအဖ အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ၂၃ နှစ်တာကာလအတွင်း လစာငွေ ဖောင်းပွမှု အဆ ၁၈၀ နီးပါးမြင့်တက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသော်လည်း အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ၅ ဆ၊ ၁၀ မျှထိပင် တိုးမြှင့်ပေးခြင်း မခံခဲ့ရဟု သူကပြောသည်။ ထိုသို့သော နှုန်းထားများကြောင့် ကျပ် တစ်ထောင်ပင်မပြည့်သည့် ပင်စင်လစာ ထုတ်ယူရန် လာရောက်နေရသည့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ ပင်စင်စားများအား သနားဖွယ်ရာ တွေ့မြင်နေရသည့် အဖြစ်က မျက်စေ့ရှေ့မှာ မြင်တွေ့ရသူအဖို့ ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရသည်ဟုလည်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်းက ပြောဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလနှင့် မတ်လများတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ပင်စင်စားများအား လစာတိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ မရှိမေးခွန်းကို ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် လောလောဆယ် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း ထိုစဉ်ကနှင့် ယခု ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဖြစ်သူ ဦးလှထွန်းက ဖြေကြားခဲ့သည်။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: Uncensored Burma Daily News Headlines - 1st July 2011
နေ့စဉ် အတွင်းအပြင် သတင်းခေါင်းစဉ်များ ကောက်နုတ်ချက်နွားကျောင်းသားကိုဝင်း၊ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁
အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရသစ် အပြန်အလှန်စာထုတ်ပြီး ဆက်သွယ်ပြီ - ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁ မိုးမခဦးဝင်းတင် ရုံးပြန်တက်သဖြင့် လူငယ်များ အားတက်ဟုဆို - ထွန်းထွန်း | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၃၀ နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်သော CoI ကော်မရှင်ကိစ္စ - ဂျိုးဆက်ဖ် ဘော (Jospeh Ball) | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၃၀ မဇ္ဈိမ) ။ ကြံ့ဖွံ့နှင့် လွှတ်တော်ဝင် ပါတီများမှ လူငယ် ၂၀ ဂျပန်သွားမည် - မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၃၀ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားအရေး အပိုင်း (၃) - ဦးမျိုး (ဥပဒေ) | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၃၀ မဇ္ဈိမ) ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သားနှင့်အတူ ပုဂံသို့ ဘုရားဖူးသွားမည် - လင်းသန့် Thursday, 30 June 2011 17:20 ဧရာဝတီသောကြာစကားဝိုင်း ရပ်နားပြီ - ဧရာဝတီ Thursday, 30 June 2011 16:58 ဧရာဝတီမပြီးသေးသော ပန်းချီကားချပ်များ - အရှင်ဇဝန Thursday, 30 June 2011 14:34 အောက်မေ့ဖွယ် ဧရာဝတီချိန်ကိုက် …... ဗုံး - ရန်ကုန်သားတာတေ Wednesday, 29 June 2011 18:53 ထွေရာလေးပါး ဧရာဝတီရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာ ဘာသာရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများဖြစ်ပေါ် - ခင်ဦးသာ Thursday, 30 June 2011 11:56 ဧရာဝတီKIO နှင့် အစိုးရတပ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး - သန်းထိုက်ဦး Thursday, 30 June 2011 13:14 ဧရာဝတီမြန်မာနည်းပြချုပ် အထုတ်ခံရဖွယ်ရှိ - ဟိန်းသူ Thursday, 30 June 2011 16:08 ဧရာဝတီမန္တလေးတွင် ဗုံးလန့် - ရန်ပိုင် Thursday, 30 June 2011 17:39 ဧရာဝတီ
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ပြန်ကျင့်သုံးပြီ - ခင်ဦးသာ Thursday, 30 June 2011 17:50 ဧရာဝတီအစိုးရမှာ ဆွေးနွေးလိုစိတ် မရှိကြောင်း ကရင်နဲ့ မွန်ခေါင်းဆောင်တွေ ပြောဆို - အာအက်ဖ်အေလူငယ်တွေ အရည်အချင်းပြည့်ဝဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း - 2011-06-29 အာအက်ဖ်အေမွန်ပြည်သစ်ပါတီ လက်နက်ချဖို့ မရှိ - 2011-06-29 အာအက်ဖ်အေ
ဇွန် ၂၈ ရက် အကြောင်းကြားစာအပေါ် ကျနော့်အမြင် - တူမောင်ညို ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁ မိုးမခဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ရရေး အမေရိကန် တောင်းဆို - AFP သတင်းဌာန ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ အကယ်၍ - သန်းဋ္ဌေးမောင် ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁ မိုးမခမစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးရာဇဓမ္မက ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာတို့ ညီညွတ်ဖို့ ဟောကြား - မိုးမခ၊ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁
အစိုးရတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေ တိုက်ပွဲဖြစ် - June 30, 2011 by နော်နိုရင်း · ဓီဗွီဘီလယ်သိမ်းခံရပြီး ထောင်ကျသည့် လယ်သမားများ ပြန်လွတ်ပြီ - June 30, 2011 by အေး​နိုင် · ဓီဗွီဘီဟန်ချက်ညီစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ဖော်ဆောင်သွားမည် - June 30, 2011 by ခင်မင်းဇော် · ဓီဗွီဘီ ဆင်ဆာအဖွဲ့ကို စိန်ခေါ်ချက်များ - June 30, 2011 by တိုင်းကျော် · ဓီဗွီဘီကချင်လူငယ်များ ဖမ်းဆီးခံနေရပြီး နှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေ - June 30, 2011 by ဒီဗွီဘီ · သတင်းတွေ ဖတ်ချင်ရင် Kowin2001@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပါမိုးမခ MoeMaKa.com အဖွဲ့က ကော်ပီကူးပြီး ဖြန့် ပါတယ်- facebook page - ကို Like ထားပါက သင့် Wall မှာ သတင်းတွေတက်တိုင်း အရောက်လာပါမယ် - Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: Burma in 50 years
၂၀၆၁ ခုနှစ် မြန်မာပြည် မြင်ကွင်းThan Htike Aungဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁http://myanmarinsingapore.com တွင် မေ ၁၈ ရက်နေ့က ဖော်ပြခဲ့သည့် Myanmar in 50 years သရော်စာကို ကူးယူပါသည်။ "ဘာကွ... မြန်မာငွေ ပါမလာဘူး။ ဟုတ်လား။ မင်းတို့ဆီက စင်ကာပူဒေါ်လာက ဒီမှာသုံးလို့ ရမယ်ထင်လို့လားကွ။"လူဝင်မှု အရာရှိ၏ ဟိန်းဟောက်မှုကြောင့် အဆိုပါ စင်ကာပူသား ခေါင်းလေး ပုဝင်သွားသည်။ ထို့နောက် မြန်မာစကား မပီကလာ ပီကလာဖြင့် "ကျနော် ရှာဝယ်ပါသေးတယ်။ မရလို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ ထိုင်းဘတ်ပဲ ဝယ်လာခဲ့တာပါ။ မြန်မာ အကြွေတွေတော့ နည်းနည်း ပါပါတယ်။" ဟုဆိုကာ တဆယ်ကျပ်တန် နှင့် ငါးဆယ်တန် တရွက်စီ ထုတ်ပြသည်။
Reactions: Verdict due for Australian Ross Dunkley, co-founder of Myanmar Times
မြန်မာတိုင်းမ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း ထောင်ဒဏ်ကျ၊ချုပ်ရက် နှင့် ငွေဒဏ်ကြောင့် လွတ်ပြီမိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန်ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁အယူခံဝင်ဦးမည်ဟု တရားရုံးရှေ့ရောက် သတင်းထောက်များကို ပြောနေသော မစ္စတာ ရော့စ် ဒန်ကလေယခင်မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း ဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ မြန်မာတိုင်းမ် (အင်္ဂလိပ်ပိုင်း) ၏ စာတည်းမှူးချုပ် ဖြစ်သူ သြစတေးလျ နိုင်ငံသား ရော့စ် ဒန်ကလေအား နာကျင်စေမှုနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေအရ စွဲဆိုသည့် အမှုအား ယနေ့ စီရင်ချက်ချရာတွင် ထောင်ဒဏ် တစ်လ အပြစ် ပေးခဲ့ပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေအရ ဒဏ်ငွေ ၁ သိန်း သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၆ လ ကျခံစေရန် ကမာရွတ်မြို့နယ် တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။မခိုင်ဇာလင်းဖေဖေါ်ဝါရီလ ဆန်းပိုင်းက နိုက်ကလပ်မှ မြန်မာ အမျိုးသမီး မခိုင်ဇာလင်းကို ရော့စ်ဒန်ကလေက သူ၏ နေအိမ်တွင် ရိုက်နှက်ခဲ့သည်ဟူသော တိုင်ကြားချက်အရ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရဲစခန်းက ရော့စ် ဒန်ကလေအား ဖမ်းဆီး တရား စွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ထောင်ဒဏ် တစ်လ ချမှတ်သော်လည်း တရားရုံးက ချုပ်ရက်များအား ထုတ်နှုတ်ခံစားခွင့် ပြုခဲ့သဖြင့် ရော့စ် ဒန်ကလေမှာ ချုပ်ရက် ၄၄ ရက် နေထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ထပ်မံ ကျခံရန် မလိုတော့ဘဲ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေအရ ချမှတ်သည့် ပြစ်ဒဏ် အတွက် ဒဏ်ငွေကျပ် တစ်သိန်း ပေးဆောင်ရန် ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ ရော့စ် ဒန်ကလေက သူ့တွင် အပြစ် မရှိဟု ယုံကြည်သဖြင့် သာမန် နာကျင်စေမှု ဖြင့် ချမှတ်သည့် ပြစ်ဒဏ်ကို အယူခံ ၀င်ဦးမည်ဟုလည်း လာရောက် နားထောင်သည့် သတင်း မီဒီယာက မေးမြန်းသည့် အခါ ဖြေကြားခဲ့သည်။အဆိုပါ စွဲဆိုမှုအရ သာမန် နာကျင်စေမှု ပုဒ်မ (၃၂၃) ဖြင့် တရား စွဲဆိုခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသား လိုက်နာရမည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေကိုလည်း ချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆကာ တရား စွဲဆိုထားခဲ့သည်။ သာမန် နာကျင်စေမှု စွဲချက်တွင် ယခု အပြစ်ရှိသည်ဟု ယူဆသဖြင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေကိုလည်း အလို အလျောက် ချိုးဖောက်ပြီးသား ဖြစ်သည်ဟု တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ကာ ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း မဆောင်နိုင်က ထောင်ဒဏ် ၆ လ ကျခံစေရမည်ဟု အမ်ိန့် ချမှတ်ခဲ့သည်ဟု လည်း ယနေ့ တရားရုံးသို့ သွားရောက် နားထောင်ခဲ့သူက ပြောပြသည်။သြစတေးလျ နိုင်ငံသားဖြစ်သူ ရော့စ်ဒန်ကလေသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဆွေ၏ သား ဆန်နီဆွေနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့အား ဖျက်သိမ်းပြီး ခေါင်းဆောင်များအား ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချပြီးနောက် မြန်မာတိုင်း ဂျာနယ် ယခင်ရရှိခဲ့သည့် စာပေစိစစ်ရေး မတင်ပြဘဲ ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခွင့် စသည့် အခွင့်အရေးများ ရုပ်သိမ်း ခံခဲ့ရသည်။ထို့နောက် နှစ်အနည်းငယ် အကြာတွင် ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဆွေ၏ သားဖြစ်သူပိုင် အစုရှယ်ယာများအား စစ်အစိုးရက ဖိအားပေး ရောင်းချစေခဲ့ရာ စွယ်စုံ မီဒီယာ ပိုင်ရှင် ဒေါက်တာ တင်ထွန်းဦး က ၀ယ်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်း မြန်မာ ကွန်ဆိုလီဒိတ်တက် မီဒီယာ ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းကို ရော့စ်ဒန်ကလေ က ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဒေါက်တာ တင်ထွန်းဦးက ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင် ထားသည်ဟု သတင်းဖေါ်ပြချက်များ အရ သိရှိရသည်။ရော့စ် ဒန်ကလေအား ဖမ်းဆီးပြီး နောက် သီတင်းပတ်အတွင်း မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသည့် မြန်မာ ကွန်ဆိုလီဒိတ်တက် မီဒီယာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ရာထူးကို ဒေါက်တာ တင်ထွန်းဦးက လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့သည်။ ထိုအချက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မီဒီယာ နယ်ပယ်မှ အယ်ဒီတာတစ်ဦးက ဝေဖန် ပြောဆိုရာတွင် ဒေါက်တာ တင်ထွန်းဦး အစုရှယ်ယာ ၀ယ်ယူသည့် ကိစ္စရပ်တွင်သာမက ယခု ဖြစ်ပျက်သည့် အမှုတွင်ပါ နောက်ကွယ်မှ စစ်အစိုးရ လက်ချက် ပါရှိနိုင်သည်ဟု သူ့အနေဖြင့် ယုံကြည်ပြီး ရော့စ်ဒန်ကလေ၏ အားနည်းချက် ဖြစ်သည့် အမျိုး သမီးငယ်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် အမှုအခင်းဖြင့် တရား စွဲဆိုဖို့ စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း သူ့အမြင်ကို ပြောပြသည်။ရော့စ် ဒန်ကလေသည် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ခြင်း သတင်း ဖေါ်ပြမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တခါတရံ စာပေစိစစ်ရေးအား ပြန်လှန် စောဒက တက်ခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့် ပြည်တွင်း၌ တစုံတရာ သြဇာရှိသည့် သတင်းဂျာနယ် နှစ်စောင်အား တာဝန်အရှိဆုံးသူ တစ်ဦးအဖြစ် အစိုးရဘက်မှ မထားလိုခြင်း ဖြစ်မည်ဟုလည်း အဆိုပါ အယ်ဒီတာက ပြောဆိုခဲ့သည်။
Reactions: is North Korean Gov runningarestaurant in Rgn?
မြောက်ကိုရီးယားတို့ ရန်ကုန်မြို့တွင် စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားသလောမိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၈ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁ရန်ကုန်မြို့ရှိ Koryo စားသောက်ဆိုင်သည် မြောက်ကိုရီးယားတို့ ဖွင့်ထားသည့် စားသောက်ဆိုင် ဖြစ်သည်ဟု မဇ္စျိမ သတင်းဌာန ၀က်ဆိုက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။Koryo စားသောက်ဆိုင်သည် ဗဟန်းမြို့နယ် ဆရာစံလမ်းတွင် တည်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်ကို မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရက စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အစိုးရနှင့်နီးစပ်သည်ဟု ဆိုသော အမည်ဖော်မထားသည့် သတင်းရင်းမြစ်တခုကို ကိုးကား ဖော်ပြထားသည်။ဆိုင်တွင် မြောက်ကိုရီးယား ၁၅ ဦး လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ဆိုင်ကို ဦးစီးသူများမှာ မြောက်ကိုရီးယားများ ဖြစ်သည်ဟူသော အမည်မဖော်သည့် ဆိုင်ဝန်ထမ်းတဦး၏ အပြောကို ကိုးကား ဖော်ပြထားသည်။ဆိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ဆိုင်တာဝန်ခံတို့နှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။Koryo သည် သက္ကရာဇ် ၉၁၈ မှ ၁၃၉၂ အထိ တည်ရှိခဲ့သော ကိုရီးယား မင်းဆက် အုပ်စိုးခဲ့သည့် ခေတ်၏ အမည် ဖြစ်သည်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု၏ အမည်လည်း ဖြစ်သည်။
Tu Maung Nyo - 28th June Letter to Suu from Regime, My take
ဇွန် ၂၈ ရက် အကြောင်းကြားစာအပေါ် ကျနော့်အမြင်တူမောင်ညို ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၈) ရက်၊ နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးအောင်ရွှေနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား “ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်” အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်သူများက မည်သို့တုန့်ပြန်ကြလိမ့်မည် ကျနော်မသိပါ။ သတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြထားသည့်အချက်များအပေါ်မူတည်၍ ကျနော့်အမြင်ကိုတင်ပြပါမည်။ “(No one can stay beyond the law) ဥပဒေပြင်ပတွင် မည်သူမျှမနေရ ဟူသည့်အတိုင်း ဥပဒေ၏ အောက်တွင် သာနေကြရမည်” ဟူသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၏ စကားကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလကချင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကလည်း တဖြည်းဖြည်း အရှိန်မြင့် ကျယ်ပြန့်လာနေသည့် အချိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်စတင်တော့မည့်အချိန် ၊ အစိုးရသစ်သက်တမ်းကလည်း ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်ရန် ရက်ပိုင်းမျှလိုတော့သည့်အချိန်တွင် ဤ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့လာခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းကြားစာ၏လိုရင်းအချုပ် NLD လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှု “အားလုံး” ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန် နှင့် လူမှုရေး အသင်း ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ လျှောက်ထားလာလျှင် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် သာပါသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေလျှင် မည်သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟု ဖေါ် ပြထားခြင်းမရှိပါ။ NLD လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုများသည် “ဥပဒေအား တမင်ဆန့်ကျင်ဖောက်ဖျက်နေမှုများဖြစ်သည်”၊ “နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကို ဆန့်ကျင် နေသည့်သဘောလည်းသက်ရောက်နေသည်” ဟုဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။ NLDက တည်ဆဲဥပဒေများ၏ အခေါင်အချုပ်ဖြစ်သော “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)”ကို “တရားမဝင်/ လက်မခံ” ဟု ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ပကတိအရှိတရား နှင့် မိမိအတ္တဘာဝအင်အား အကြားက ကွက်လပ်ကို တံတားခင်းပေးရမည်မှာ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ A leader must lead. ခေါင်းဆောင်သည် ခေါင်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ရေးနဲ့ တော်လှန်ရေး ရွေးချယ်စရာ
ပကတိအရှိတရားကို ရိုးရိုးစင်းစင်းနာခံကြသူများမှာ ပြုပြင်ရေးသမားများ (ဝါ) ဖန်ခွက်ထဲရေတစ်ဝက်ရှိခြင်းကို နှစ်သက် လက်ခံကြသူများ၏ အဆုံးစွန်သော လုပ်ဟန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ပေးသလောက်၊ ရသလောက်ယူကြမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုသူများသည် ယခုအခါ “လွှတ်တော်”ဆိုသည်များထဲတွင် သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း တိုင်းပြည်နှင့် လူထုအကျိုးရှိမည့်ကိစ္စ များကို ချမှတ် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်သည့် စွမ်းအားမရှိသလို၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူထုအကျိုး ထိခိုက်စေမည့်ကိစ္စတွင်လည်း ကန့်ကွက် တားဆီးနိုင်သည့်အင်အား မရှိကြောင်း လက်တွေ့သိမြင်နေကြရပြီဖြစ်သည်။ ရောဂါဘယကို ကုသပျောက်ကင်းစေနိုင်သည့် အစွမ်းထက်ဆေးဝါးများမှာပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (side effect) ပါရှိမြဲ ဖြစ်ပါသည်။ လူထုကို စည်းရုံးပြီး လူထုစွမ်းအား (people's power) ဖြင့် ပကတိအရှိတရားဆိုသည်များကို တော်လှန်ကြရာတွင်လည်း အချို့သောအနိဋ္ဌာရုံများကို မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမည်မှာ ဓမ္မတာသဘောပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပြပြင်ရေးသမားများသည် တော်လှန်ရေးကို ကြောက်ကြသည်။ သို့အတွက် တော်လှန်ရေးတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်သည့် အချို့သောအနိဋ္ဌာရုံများကို တစ်ဆိတ်တစ်အိတ်လုပ်ကာ ပြည်သူများကို ချောက်လှန့်တတ်ပါသေးသည်။ ယနေ့ကာလ၏ ပကတိအရှိတရားဆိုသည်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်က အရပ်သားအစိုးရအသွင်ယူကာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ (၂၀၀၈) ဖြင့် ပြည်သူလူထုအား ဖိနှိပ်အုပ်စိုးနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့သော ပကတိအရှိတရားကို ပြုပြင်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် မတွန်းလှန်နိုင်ပါ။ တော်လှန်သောနည်း၊ တော်လှန်ရေးနည်း၊ လူထုနည်း၊ လူထုတော်လှန်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့်သာ ဖြတ်သန်းကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကောင်း တစ်ဖွဲ့ကောင်းဖြင့်လည်း ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်ဝဲ လက်ယာ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပအင်အားစု အသီးသီး၏ လက်တွေ့ကျပြီး အလုပ်ဖြစ်သည့် ညီညွတ်မှုစွမ်းပကားသည် အခရာ ကျသောအခန်းကပါဝင်နေပါသည်။ တော်လှန်သောနည်း/ လူထုနည်းနှင့် လူထုစွမ်းအားကို လက်ရှိအစိုးရသည် အင်မတန်ကြောက်ပါသည်။ သာမန်ပြည်သူတစ်ဦးပါလို့ သူတို့ ဘယ်လိုပင် ပြောဆိုနေစေကာမူ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်သည် သူတို့အတွက် “ရင်မအေးဖွယ် Issue တစ်ခု” ဖြစ်နေပါသည်။ ထိပ်လန့်နေပါသည်။ သို့အတွက်လည်း “ဒီပဲယင်း ဖြစ်ရပ်” ကဲ့သို့ ရာဇဝတ်မှု/ အကြမ်းဖက်မှုမျိုးဖြင့် ရမ်းကားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် သတိရှိရပါမည်။ လူထုနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ရေနှင့်ကြာပမာ ဆက်စပ်သွားတဲ့အခါ၊ လူထုကြီးက တော်လှန်တဲ့သဘောတရားကို ဆုပ်ကိုင် လာတဲ့အခါမှာ အင်မတန် အစွမ်းထက်မြက်သော ရုပ်ဝတ္တုအင်အားဖြစ်လာပါသည်။ ထိုစွမ်းအားဖြင့်ပင် လူထုများသည် သမိုင်းခေတ်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြပါသည်။ ဖန်တီးနေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။